दउवासंघमा चुनाव जित्ने आधार के छन् ? – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
दउवासंघमा चुनाव जित्ने आधार के छन् ?
भदौ १८, २०७६ १५:४४ मा प्रकाशित
दमक । सधैं हसिलो, मिलनसार र सहयोगी भावना राखेर दमकमा घुलमिल भएको युवा व्यवसायीहरु माझ लोकप्रिय नाम हो गोकूल श्रेष्ठ । दमक उद्योग वाणिज्य संघको कार्य समिति सदस्य हुँदै प्रथम उपाध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका श्रेष्ठको परिचय व्यवसायिक क्षेत्रसंगै सामाजिक रुपमा पनि उत्तिकै छ ।
आर्थिक रुपमा पारदर्शी र सफ सफल व्यवसायीको छवि बनाउन सफल श्रेष्ठले संघमा पहिलो पटक कार्यसमिति सदस्य निर्वाचित हुँदा सर्वाधिक मत ल्याएर लोकप्रियता कमाएका थिए । दोश्रो पटक प्रथम उपाध्यक्षमा उनी भारी मत ल्याएर विजयी भए भने ३ बर्ष अघिको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुँदा उनी झिनो मतान्तरले पराजित भएका थिए । अघिल्लो निर्वाचनले दिएको परिणामलाई आत्मसाथ गर्दै श्रेष्ठ पदीय जिम्मेवारीमा नरहेपनि निरन्तर व्यवसायीहरुको सुखदुखका सारथी बनिरहे । जसका कारण यसपटकको निर्वाचनमा पुन उनलाई लोकतान्त्रिक व्यवसायीहरुले साझा उम्मेद्वारका रुपमा अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वार बनाएर चुनावमा होमिएका छन् । प्रस्तुत छ अध्यक्षका प्रत्यासी श्रेष्ठसंग गरेको चुनाव केन्द्रित कुराकानी
संयुक्त लोकतान्त्रिक प्यानलको चुनाव प्रचार प्रसारको अवस्था के छ, व्यवसायीहरुले के प्रतक्रिया दिईरहनु भएको छ ?
हामी लगभग १० दिनदेखि चुनावी अभियानका क्रममा छौं । संघका निवर्तमान अध्यक्ष दमक उद्योग वाणिज्य संघका धरोहर पूर्व अध्यक्ष ज्यूहरु पनि हामीसंगै यो चुनावी दौरानमा छौं । हामीले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरेर चुनावी प्रचारप्रसारका अनेकौं माध्यमहरु उपयोग गरिरहेका छौं । प्रचार प्रसारका सिलसिलामा सके सम्म र भ्याए सम्म सबै मतदाताका घर वा पसल, फर्महरुमा हामी पुगेका छौं ।
कतिपयसंग प्रत्यक्ष भेट भएर हात जोड्न नभ्याए पनि सञ्चारका अरु माध्यमबाट मन जोडेका छौं । उहाँहरुबाट शुभेच्छा पाईरहेका छौं । व्यवसायीहरुमाझ पुग्दै गर्दा हामीले थुप्रै प्रतिक्रियाहरु पाएका छौं । कि संघको यस अघिको निर्वाचन परिणाम जे भए पनि अबको मत व्यवसायीहरुको साझा र समावेशी युवा व्यवसायीहरुलाई दिने उहाँँहरुले बचन दिईरहनु भएको छ । कतिपय यस अघि हामीलाई मतदान गर्नबाट चुक्नु भएका व्यवसायीहरुले समेत पश्चताप गरिरहनु भएको रहेछ ।
उहाँहरुसंग पहिला स्वतन्त्र व्यवसायीका नाममा भोट माग्नेहरु यसपाली रातारात पार्टीको हेडक्वार्टरबाटै उम्मेद्वार छानिएर आउनु भएको भन्ने पनि थाहा पाउनु भएछ । चुनावमा मतदाता व्यवसायीहरुलाई झुक्याएको यथार्थ अहिले व्यवसायीहरुले बुझिसक्नु भएछ । हामी दलीय व्यवस्थामा छौं, हामी विधि र प्रकृयाबाट उम्मेद्वार छनौट भएका हौं र लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मतदानका बिधीबाट चुनिने र साझा संस्थामा प्रतिनिधि भएर गएपछि साझा नेतृत्वको भुमिका निर्वाह गर्नेछौं । यो कुरा व्यवसायीहरुले बुझिसक्नु भएको छ , बुझि नसक्नु भएकाहरुले पनि बुझ्नुहुनेछ । अहिलेसम्मको चुनावी माहोलबाट म सन्तुष्टका साथै उत्साहित छु ।
तपाइँहरुका चुनाव जित्ने आधार के छन ?
पहिलो कुरा त चुनाव भन्ने वित्तिकै प्रतिस्पर्धा हो । हामीले यो कुरा बुझेरनै प्रतिस्पर्धाको बलियो तयारी गरेर चुनामा होमिएका छौं । दोश्रो कुरा आम व्यवसायीहरु वास्तविकतालाई स्विकार्नु हुन्छ । हामीले नहुने सपना बाँडेका छैनौं । हाम्रो तर्फबाट संयुक्त प्रतिबद्धता पत्र मतदाताहरुमाझ सार्वजनिक भईसकेको छ । हाम्रो प्रतिबद्धता पत्र पूर्णतया व्यवसायीक क्षेत्रमा भएका र हुन सक्ने सम्भावित समस्याहरुको समाधानमा केन्द्रित छ । हामीसंग आत्मविश्वास छ । आम व्यवसायीको समर्थन र ऐक्यबद्धता छ । हामी हिजो संघमा रहँदा हामीले गरेका कामको मुल्याङकन आम उद्योगी व्यवसायीहरुले गर्नुभएको छ । म दाबी साथ भन्छु अहिले सम्म कहिं कुनै पनि सामाजिक राजनीतिक नेतृत्वमा छदाँ कसैले औंला उठाउनु पर्ने किसिमको काम गरेको छैन ।
जिम्मेवारीबाट कहिल्यै च्युत भएको छैन भन्ने लाग्छ । बरु हामीले थालनी गरेका केही महत्वपूर्ण कामहरुलाई तत्कालिन नेतृत्वले लत्याउने र वेवास्ता गर्ने काम गरेको छ । त्यसले आम दमकबासी र यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुमाथि अन्याय भएको छ ।
हिजो हामीले संघको नेतृत्वबाट बाहिरिँदै गर्दा संघको कोषमा जम्म गरेको रकम आज अपारदर्शी रुपमा आफ्नै लगानीका सहकारीमा जम्मा गरेर त्यसैको ब्याजले आफ्नो पार्टी संगठन बनाउन साथीहरु लागेको कुरा प्रतिवेदनले आफैं बोलिसकेको छ । हामी व्यवसायी उम्मेद्वारहरु बजारमा जाँदै गर्दा हाम्रो टिमले सिंगो नेपालको प्रतिनिधित्व गरेको छ । हाम्रो टिम समावेशी र साझा प्रतिनिधित्व गर्ने टिम छ । राजनीतिक रुपमा फरक आस्था विचार राख्नुहुने वामपन्थी साथीहरु समेतले यसलाई स्विकार्नु भईरहेको छ यो पनि हामीलाई मतदाताहरुले विश्वासको मत दिने आधार हो ।
वाणिज्य संघका साझा समस्या के देख्नु हुन्छ ?
पहिलो कुरा आम उद्योगी व्यवसायीहरुले भोग्नु परिरहेको साझा समस्या भनेको दोहोरो तेहोरो करको भारनै हो । आफ्नो लगानी गरेर व्यापार गर्नु अनि पुलिस , प्रशासन र कर कार्यालयका मान्छे आउँदा कुनै अपराध गरेको जस्तो उनीहरुलाई ज्यू हजुरी गर्नुपर्ने अवस्था छ । दुई तिहाईको सरकार आज सिंगो निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्न उद्यत छ । हामीले यसबाट व्यवसायीहरुलाई मुक्त राख्नु परेको छ । त्यसका लागि तल्लो तहदेखी नै स्पष्ट भिजन केन्द्र सम्म पुर्याउन आवश्यक ठानेको छु । विकासमा निजी क्षेत्रको सहकार्य र सहभागितासंगै आम व्यवसायीहरुको अधिकार स्थापित गर्न आवश्यक छ ।
यहाँको बजार विस्तार, व्यवसायीक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, लगानी विस्तार जस्ता समस्या देखि उद्यमी,व्यवसायीका अनेकौ समस्या यथावत छन् । दमकलाई वृहतर विकासमा अघि बढाउदै भोलिको दिनमा मुलुककै महत्वपूर्ण शहरको रुपमा चिनाउन संघको भुमिका कमजोर भईरहेको छ । यसलाई कुनै अमुक पार्टीको भन्दा पनि सबैको साझा संस्थाका रुपमा विकास गर्न सकिएको देखिएन ।
संघको नेतृत्वमा पुग्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ ?
म आम व्यापारी व्यवसायी साथीहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि निरन्तर तपाइँहरुका दुख सुखमा मेरो साथ रहन्छ । अरु कुनै क्षेत्रमा जाने मेरो सोच छैन । वाणिज्य संघमा रहेर आफ्नो र यहाँका व्यापारीहरुको दुःखकष्ट, साथ–सहयोग, छलफल–अन्तरक्रिया तथा दमकलाई मुलुकमै एउटा शान्त, सुन्दर र उत्कृष्ट बजार कसरी बनाउन सकिन्छ म त्यसमै समय खर्चिन चाहन्छु ।
चुनावी ताका ठुलाठुला कुरा गरेर मतदातालाई अलमलाउने र केवल मत मात्रै लिने परम्पराको अन्त्य हामी गर्नेछौं । हाम्रो गठबन्धनले व्यवसायीक हकहितका विषयमानै हामी केन्द्रित हुनेछौं । हामी ग्यारेन्टीसाथ भन्छौं कि हामीले संघको नेतृत्व गरेपछि सरकारले त के गर्ला नगर्ला हाम्रो काम खबरदारी गर्ने हो हामी त्यसमा लाग्छौं नै । तत्कालै संघले व्यवसायीहरुसंग लिँदै आएको चर्को शुल्क हामी घटाउँछौं यसमा कसैको दुईमत हुनेछैन ।